mairie-antananarivo – BMH Isotry – CUA : Didi-Poitra faobe
BMH Isotry – CUA : Didi-Poitra faobe
auteur 24 jolay 2017 Commentaires fermés
Mbola mitohy hatrany ny fanaovana didi-poitra faobe ho an’ireo zazalahy kely mbola tsy vita izany eto anivon’ny Boriboritany Voalohany. Raha ny andron’ny Zoma 21 Jolay dia niisa 7 teo izy ireo no natao hasoavavana tao amin’ny BMH Isotry, ankizy izay avy amin’ireo fokontany toy ny Ankasina, Manarintsoa Afovoany, Andavamamba Anjezika, Ampandrana Ankadivato, Antohomadinika,…
Tsy nody maina ihany koa ireo ankizy fa mbola nozaraina kilalao avy amin’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra. Tsara marihina fa tsy misy ny vola aloha fa iantsorohan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra avokoa ny fanafody sy ny fitaovana.
Ho an’ireo izay liana amin’ny fanaovana didi-poitra kosa dia mbola mitohy ny fisoratana anarana maimaim-poana eny anivon’ny fokontany izay misy anao. Misy kosa ny « visite médicale » alohan’ny fanatanterahana ny didi-poitra.